Fedora 25 Beta misy | Avy amin'ny Linux
Fedora 25 Beta misy
Azo alaina izao Fedora 25 Beta, izay kasaina hosoloina ny kinova farany izay antenaina hivoaka amin'ny 15 Novambra.
Ity famotsorana ity dia misy ny dikan-teny desk, servers y Fedora Cloud Edition, izay misy ny fampidirana ny Kernel Linux 4.8, fanatsarana ny fiarovana satria hanohana serivisy fanamarinana marobe sy ny tontolon'ny birao izany GNOME 3.22 ankoatry ny fiasa hafa.
1 Fedora 25 Beta endri-javatra
2 Ahoana ny fampidinana ny Fedora 25 Beta
Fedora 25 Beta endri-javatra
Tontolo iainana Desktop GNOME 3.22
Fedora Media Writer hamorona USB mora azo haingana sy haingana.
Module SELinux ho an'ny fitantanana mpizara.
Wayland ho mpizara sary.
Fanohanana ny fiteny fandaharana Rust.
OpenSSH 7.3p1 sy OpenSSL 1.0.2j hanatsarana ny filaminana.
Fampidirana tranomboky Tabilao 12.0.3 3D hanatsarana ny sary.
Node.js nohavaozina amin'ny kinova 6.x.
Fanohanana tsara kokoa ho an'ny Flatpak.
Fanavaozana ireo rindrambaiko isan-karazany mandrafitra ny fizarana.
Ahoana ny fampidinana ny Fedora 25 Beta
Azonao atao ny misintona ny andianteny WorkStation, Server ary Cloud an'ny Fedora 25 avy amin'ireto rohy manaraka ireto:
Sintomy ny Beta WorkStation
Sintomy ny Beta Server
Sintomy ny Beta Cloud
Ampirisihina izahay mba tsy hampiasa an'ity kinova Beta ity amin'ny tontolon'ny famokarana, fa manomboka izao dia mamporisika anao izahay hanomboka hanandramana an'ity kinova vaovao an'ny Red Hat ity ary hamela anay ny fiheveranao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Fedora 25 Beta misy
Papirus Icon Theme for Unity, Gnome, Pantheon, Cinnamon, XFCE ankoatry ny hafa
Mamorona rindranasa amin'ny birao amin'ny pejin-tranonkala